Top 5 Sữa dưỡng thể Vaseline tốt nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Sữa dưỡng thể Vaseline tốt nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Sữa dưỡng thể Vaseline tốt nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Iyiphi i-vaseline brand lotion enhle? Funda ukuthi ungakhetha kanjani i-vaseline body lotion efanele yesikhumba sakho esihlokweni esilandelayo!
Imikhiqizo yobisi lomzimba isiyisinyathelo sobuhle esibalulekile nesibalulekile ukusiza isikhumba sibe mhlophe futhi sibushelelezi. Ngemuva kwesikhathi sokusetshenziswa, isikhumba esimnyama, esimnyama, esomile esibangelwa ukuchayeka elangeni sizothuthukiswa kakhulu.
Omunye wemikhiqizo yokugcoba umzimba ethandwa kakhulu emantombazaneni yi-Vaseline body lotion brand. Ngakho-ke ukuthola ukuthi iyiphi i-vaseline body lotion enhle nokuthi ungakhetha ukuyithenga kanjani I-vaseline body lotion ezifanele isikhumba esifanayo thola esihlokweni esilandelayo!
1 Ulwazi olujwayelekile mayelana ne-vaseline body lotion
2 Ukuhlukaniswa komkhiqizo wokugcoba umzimba ka-vaseline
2.1 Ngokusekelwe ekubunjweni kwe-vaseline body lotion
2.1.1 I-vaseline body lotion enombala ophinki
2.1.2 I-vaseline body lotion enombala oluhlaza okwesibhakabhaka
2.1.3 I-vaseline body lotion enombala ophuzi
2.2 Ngokusekelwe ekusetshenzisweni kobisi lomzimba
2.2.1 Ubisi lomzimba olumhlophe lwesikhumba
2.2.2 Ubisi lomzimba olumanzisa
3 Indlela yokukhetha ukuthenga I-lotion ye-vaseline engcono kakhulu yomzimba
3.1 Khetha i-vaseline body lotion yohlobo ngalunye lwesikhumba
3.2 Sebenzisa i-lotion yomzimba yesizini
3.3 Cwaninga kahle umkhiqizo bese uthintana nabasebenzisi kuqala
4 Imikhiqizo engu-5 ethandwa kakhulu yokuthambisa umzimba kaVaseline
4.1 1. Uvaseline uphelele 10 ku-1 lotion womzimba
4.2 2. Uvaseline osheshayo wokugcoba umzimba olungile
4.3 3. I-Vaseline Sunscreen SPF 24 PA ++
4.4 4. I-vaseline enempilo emhlophe ye-UV lightening body lotion
4.5 5. I-vaseline enempilo emhlophe ekhanyayo yokukhanya ebonakalayo ebonakalayo
Ulwazi olujwayelekile mayelana ne-vaseline body lotion
I-Vaseline Body Lotion Njengoba isithako esiyinhloko kunguwoyela namanzi, ingenye yemikhiqizo yobuhle nokunakekelwa kwesikhumba ethandwa kakhulu emakethe namuhla. Amafutha okuthambisa kanye namanzi anezinzuzo zokugcoba nokuthambisa bekulokhu kwethenjwa abesifazane ukuthi babe yingxenye ebalulekile yokuphila. Uvaseline kade waduma emkhakheni wokunakekelwa konobuhle udala igama nomlando. Lo mkhiqizo uhlinzeka ngezinhlobonhlobo zokunakekelwa kwesikhumba ezithengekayo kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kobuhle ethandwa ngabesifazane banamuhla.
Imikhiqizo yokugcoba umzimba ka-vaseline enomphumela wokuba mhlophe, ukushelela, ukuvikela ilanga, ukuvikela isikhumba ngaphansi kwethonya lemisebe ye-UVA ne-UVB, inikeza umswakama obalulekile esikhumbeni ukuze usize ukuvimbela isikhumba esomile, esiqhekekile futhi kwandise ukunwebeka. Ungalusebenzisa kanjani ubisi olumanzisa uVaseline ngempumelelo, udinga nje ukuthatha inani elifanele lelotion yomzimba entendeni yesandla sakho bese uwubhucunga ngendlela ezungeza yonke indawo yesikhumba. Bese ubamba kancane ukuze imisoco esemzimbeni ingene ngokulinganayo esikhumbeni. Ungasebenzisa i-vaseline body lotion izikhathi ezimbili: ngemva kokugeza nangaphambi kokuphuma. Ukuze usebenze kahle kakhulu, abasebenzisi kufanele basebenzise izikhathi ezi-2 ngosuku ngemuva kokuhlanza
Xem Thêm TOP cửa hàng tiện lợi đang thống lĩnh thị trường Việt Nam | Muasalebang
Ukuhlukaniswa komkhiqizo wokugcoba umzimba ka-vaseline
Uvaselina wethula imikhiqizo eminingi eyahlukene esebenzisa izinto eziningi. Kodwa-ke, ngokuya ngemibandela yezithako nokusetshenziswa, zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili ezilandelayo
Ngokusekelwe ekubunjweni kwe-vaseline body lotion
Ngokwezithako, i-vaseline body lotion ihlukaniswa ngombala ukuze ilethe ukusetshenziswa okuhlukile kubasebenzisi:
I-vaseline body lotion enombala ophinki
Uvaseline unemibala engu-7 esebenzisa okuhlukene kanye namazinga okunakekelwa kwesikhumba afanele uhlobo lwesikhumba ngalunye. I-vaseline pink body lotion enezinga eliphezulu lokuvikela ilanga ifanele isikhumba esivamile, isikhumba esomile kanye nesikhumba esihlangene. Izithako eziqukethe i-petroleum jelly zingena esikhunjeni ukusiza ukubuyisela isikhumba esonakele. Ngaphandle kwalokho, iqukethe ne-vitamin B3 kanye ne-vitamin E ukusiza isikhumba sibe mhlophe futhi sibone ngemva kwesikhashana sokusetshenziswa. Ngokokuqala ngqa ukusebenzisa, kufanele uhlole kancane engalweni yakho kuqala ukuze ugweme ukungezwani komzimba okungafunwa.
I-vaseline body lotion enombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Umkhiqizo onophawu lwe-Vaseline othandwa kakhulu ngabathengi i-blue lotion ye-Vaseline yomzimba. Idizayini yokupakisha eluhlaza okwesibhakabhaka ibonisa ngokusobala ukuthi isithako esiyinhloko i-aloe vera, esiza ukuletha ubusha kumsebenzisi. Ngemuva kokuyisebenzisa isikhashana, uzozwa ushintsho olukhulu esikhumbeni sakho ngenxa yekhono lokuthambisa futhi libe mhlophe emkhiqizweni. Umkhiqizo unephunga elimnandi lemvelo futhi iphunga aliqhubeki kakhulu futhi alibangeli ukungakhululeki kubantu abaseduze.
I-vaseline body lotion enombala ophuzi
I-vaseline yellow body lotion ivela ngezinhlobo ezimbili, umswakama ophelele kanye nokunakekelwa okukhulu. Umugqa ophelele we-marshall wazalwa okokuqala nomsebenzi oyinhloko wokuthambisa, ngakho-ke wawungathandwa. Ulayini womkhiqizo we-ipkall oqinile wazalwa kamuva nentuthuko evelele ukuletha amandla okuba mhlophe ngokushesha, uhehe ukunaka kwabathengi abaningi.
Ngokusekelwe ekusetshenzisweni kobisi lomzimba
Mayelana nokusetshenziswa, uVaseline wethule imigqa yomkhiqizo emi-2 esebenzisa izinto ezi-2 eziyinhloko: ukugcoba umzimba okumhlophe kanye nokuthambisa umzimba okumanzisa.
Ubisi lomzimba olumhlophe lwesikhumba
I-vaseline whitening body lotion inokuvikela elangeni ukuvikela isikhumba emisebeni ye-UV namavithamini ikakhulukazi uvithamini b3 ukusiza ukondla isikhumba esimhlophe nesikhanyayo. Ngaphezu kwalokho, eminye imikhiqizo iqukethe izinto ezikhanyayo ezisiza ukwenza isikhumba sibe mhlophe ngaso leso sikhathi, sinikeze izinzuzo ezibanzi ezihlanganisa ukondla, ukwenza mhlophe nokuvikela isikhumba.
Ubisi lomzimba olumanzisa
I-lotion ethambisa umzimba ngamaconsi e-Vaseline Jelly ithambisa umzimba kusuka ngaphakathi ukwenza ngcono isikhumba esomile, ilethe umswakama nokuthambile esikhumbeni. Ngemva kwesikhathi sokusetshenziswa, uzozwa umehluko kanye nokuthuthuka okuphawulekayo esikhumbeni sakho.
Indlela yokukhetha ukuthenga I-lotion ye-vaseline engcono kakhulu yomzimba
Umkhiqizo ofanelekile wokuthambisa umzimba uzoletha izinzuzo eziningi kumsebenzisi njengokuthambisa, ukuvikela ilanga, ukuthuthukisa umbala wesikhumba. Ngakho-ke iyini imfihlo yokuthola okokuthambisa okufanelekile kohlobo ngalunye lwesikhumba, nanka amathiphu
Xem Thêm Top 9 bình xịt tưới cây tốt nhất năm 2022 | Muasalebang
Khetha i-vaseline body lotion yohlobo ngalunye lwesikhumba
Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokukhetha i-lotion yomzimba, udinga ukuqonda kahle isikhumba sakho. Isikhumba esomile sidinga ukuvikeleka okuphezulu ngefomula ethambisayo, kuyilapho isikhumba esinamafutha sidinga ukukhetha ifomula emnene
Kwabesifazane abanesikhumba esibucayi, thintana nodokotela wesikhumba ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthenga imikhiqizo ozoyisebenzisa. Ngokuvamile, i-Vaseline body lotions izosho ngokucacile izithako ephaketheni, ungathembela kulezi zithako ukuze ukhethe umkhiqizo ofanele. Uma ufuna ukuqiniseka ukuthi isikhumba sakho siwufanele lowo mkhiqizo, kufanele uthenge ibhodlela elincane futhi ulisebenzise. Uma ukulunywa, ukulunywa noma ububomvu, yeka ukusebenzisa ngokushesha futhi uthintane nodokotela wesikhumba.
Sebenzisa i-lotion yomzimba yesizini
Iseluleko esisodwa kubasebenzisi ukukhetha phakathi kwezithambiso zomzimba zesizini. Ebusika udinga ukukhetha ubisi olujiyile olunomthamo omkhulu ngoba ebusika isikhumba esomile sizodinga umswakama ophezulu. Ehlobo, kufanele ukhethe i-lotion yomzimba emnene ene-adhesion encane, ngisho nje ne-sunscreen, okuzoba yisinqumo esihle kakhulu.
Cwaninga kahle umkhiqizo bese uthintana nabasebenzisi kuqala
Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthenga umkhiqizo, kufanele ufunde ngokucophelela mayelana nomkhiqizo ohlose ukuwuthenga, ungakholelwa ku-hype, kodwa kufanele uthintane nokubuyekezwa okuqondile okuvela kubantu abasebenzise umkhiqizo. Umkhiqizo ngamunye I-vaseline body lotion izoba nephunga lesici futhi ifanise izintandokazi zomsebenzisi ngamunye ohlukile.
Kufanele ukhethe imikhiqizo enephunga elithambile ezwakala inethezekile futhi kumnandi ukuyisebenzisa. Qaphela ukuthi esitho somzimba ngasinye esihlukene, izinhlobo ezahlukene zokuthambisa umzimba kufanele zisetshenziswe. Ungasebenzisi amafutha okugcoba ebusweni ezandleni noma kwezinye izingxenye ngoba lokho kungabangela imiphumela engalindelekile njengokuluma, ukungezwani komzimba nezinto ezithile, ukushiswa kobuso. Ngenxa yokuthi isikhumba sobuso siyisikhumba esincanyana, sizofaneleka emikhiqizweni enezinto ezithambile kuyilapho ezinye izingxenye zomzimba zidinga ifomu elijiyile nelinokhilimu.
Imikhiqizo engu-5 ethandwa kakhulu yokuthambisa umzimba kaVaseline
Ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo yokugcoba umzimba kaVaseline, abasebenzisi abakwazi ukuzibamba ngaphandle kokuzibuza ukuthola umkhiqizo olungile. Nasi isifinyezo semikhiqizo emi-5 I-lotion ye-vaseline engcono kakhulu yomzimba edumile emakethe.
1. Uvaseline uphelele 10 ku-1 lotion womzimba
I-vaseline iphelele i-10 ku-1 umzimba wokugcoba wokugcoba no-vitamin b3 isithako esinamandla okuthambisa ukusiza ukuthuthukisa isikhumba futhi ulethe ukusebenza kahle ngemva kwesikhathi esifushane sokusetshenziswa.
Uvaseline ophelele ongu-10 kokukodwa kokukodwa komzimba usiza abesifazane ukuthi bagweme futhi banciphise izimpawu zokuguga ngaphambi kwesikhathi esikhumbeni ukuze balondoloze ukukhazimula kobusha.
Ikhono lokukhipha, imibimbi ebushelelezi, ukuthuthukisa ukuguga, ukwenza isikhumba sicwebezele futhi siqine
Iphunga elithambile alibangeli ukungakhululeki nokucasuka esikhumbeni
Idizayini yebhodlela elihlangene kulula ukuyiphatha lapho usohambeni
Xem Thêm Top 10 shop quốc tế uy tín trên Shopee không thể bỏ qua | Muasalebang
Umkhiqizo ungasetshenziswa kuphela ezithweni zomzimba futhi awukwazi ukusetshenziswa ebusweni.
2. Uvaseline osheshayo wokugcoba umzimba olungile
Izithako esikhumbeni se-lotion zine-glycerin, i-Niacinamide, i-titanium dioxide ene-moisturizing, i-whitening nemiphumela yokuvikela ilanga kancane esikhumbeni.
Umkhiqizo onomphumela wokuba mhlophe futhi ukhanyise isikhumba ngenxa yokuqukatha izinto ezincane ezibonisa ukukhanya ukusiza ukuvimbela ukukhanya kwelanga ngisho nethoni yesikhumba.
Isiza ukuvikela imiphumela eyingozi yemisebe ye-UV ngenxa yezithako ze-bioactive ezigcina ubumhlophe obuhlala isikhathi eside esikhumbeni noma singasetshenziswa.
Umkhiqizo unephunga elithambile elenza ukhululeke ukulisebenzisa
Iphunga lihlala esikhumbeni isikhathi eside ukuze lisize umsebenzisi abe nephunga elimnandi usuku lonke
Iphunga emkhiqizweni lenza abantu abaningi bazizwe bengakhululekile
3. I-Vaseline Sunscreen SPF 24 PA ++
Isikhumba asithinteki kuphela ilanga, kodwa futhi nezici zemvelo ezifana nomoya ongcolile, okubangela ubumnyama nokulimala. Uvaseline wethule iVaseline yokuvikela ilanga i-SPF 24 PA ++ body lotion ngenhloso yokwenza ngcono isikhumba.
Umkhiqizo unomsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokuvikela ilanga nge-SPF 24 PA ++
Isilinganiso esimaphakathi sokuvikela ilanga sidala izimo ezinciphisa ukuchayeka esikhunjeni futhi sigweme umonakalo odalwa imisebe ye-ultraviolet.
Ifomula ye-SPF isiza ukuvikela isikhumba emiphumeleni yemvelo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinto eziyingozi ezivela endaweni ezungezile azingeni esikhumbeni ezibangela izifo eziyingozi.
Ikhono lokwenza mhlophe, umswakama ophezulu usiza isikhumba esibushelelezi esimweni sezulu esomile saseVietnam
Umkhiqizo uyacwaningwa futhi wengezwe i-petroleum jelly ukusiza izakhi zingene kalula kungqimba ngalunye lwe-epidermis ukuze zondle isikhumba kusuka ngaphakathi nangaphandle.
Intengo yomkhiqizo ishibhile futhi iyathengeka kubathengi abaningi
Imikhiqizo esetshenziswa emini ayikwazi ukusetshenziswa ebusuku
4. I-vaseline enempilo emhlophe ye-UV lightening body lotion
Izithako ezisemzimbeni wokugcoba zihlanganisa uvithamini B3 kanye novithamini E ukusiza ukwenza mhlophe kusuka ekujuleni, ngesithako esisebenzayo se-isopropyl ukusiza ukulinganisela umswakama esikhumbeni kanye ne-Stearic acid ukunikeza isikhumba ukubukeka okucwebezelayo nokuqinile.
Ulayini wokugcoba umzimba omhlophe ongasetshenziswa kuwo wonke umzimba, ohlinzeka ngemiphumela emhlophe esheshayo emavikini angu-2 okusetshenziswa ukusiza ukwenza isikhumba sibe mhlophe ngokwemvelo nangokukhazimulayo.
Kwengezwe uvithamini b3 ukusiza ukuvikela isikhumba emiphumeleni yelanga kanye nefilimu yokuvikela elangeni evimbela ngempumelelo ukushuka uma isetshenziswa imizuzu engama-30 ngaphambi kokuchayeka elangeni.
Iphunga lobisi lincane futhi alibangeli ukucasuka esikhumbeni
Intengo yesigcobo somzimba iphezulu uma iqhathaniswa neminye imigqa yomkhiqizo
5. I-vaseline enempilo emhlophe ekhanyayo yokukhanya ebonakalayo ebonakalayo
Umkhiqizo uqukethe i-pro retinol ne-AHA ukusiza ukususa amangqamuzana esikhumba afile, ukuvuselela ukukhiqizwa kwe-collagen, ukunciphisa imibimbi nokuvimbela ukuguga. Futhi iqukethe uvithamini A ukusiza ukukhanyisa ngisho nethoni yesikhumba
Ulayini wokugcoba umzimba wengeza i-essence ethambisayo kanye nezakhamzimba ukwenza isikhumba sithambile futhi siqine kusukela ekujuleni kwangaphakathi, esifanele ukunakekela isikhumba esomile, esiqhekekile futhi esomile ngenkathi ebandayo.
Isiza ukugqugquzela ukuvuselelwa kwamangqamuzana, ukubuyisela ngokushesha umonakalo nokugcina ukuzinza kwesikhumba
Ithuthukisa ukwakheka kwesikhumba ukunikeza abasebenzisi isikhumba esisha ngaphandle kokukhathazeka ngokoma nokuqhekeka futhi uma sisetshenziswa isikhathi eside.
Idizayini ebambene futhi elula yokupakishwa komkhiqizo we-lotion womzimba omuhle futhi ohlangene
Idizayini yesivalo evulekile yenza kube nzima ukuyisebenzisa
Ukwabelana okungenhla kusize amakhasimende ukuphendula umbuzo I-vaseline body lotion Hlobo luni oluhle? Ungakhetha kanjani ukuthenga i-vaseline body lotion efanele isikhumba sakho. Emikhiqizweni emi-5 ephezulu ye-Vaseline Body Lotion sincoma amafutha okugcoba elanga okwenziwa abe mhlophe elanga Uvaseline SPF 24 PA ++. Ucabangani ngalo mugqa womkhiqizo wabelane nathi esihlokweni esingezansi!
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-3,271, ukuvakashelwa okungu-4 namuhla)
Bật mí 2 cách làm rau câu sữa tươi đơn giản ngày tại nhà | Muasalebang
[Review] TOP 5+ Kem Trị Đồi Mồi Hiệu Quả Tốt Nhất Hiện Nay | Muasalebang